Abakhiqizi nabahlinzeki be-RGB LED | I-China RGB LED Ifektri
Imiphumela ekhanyayo ephezulu kane ku-5054 RGB Series eyodwa
Incazelo Yomkhiqizo I-RGBW5054package inokukhishwa kokuqina kokuqina, Ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu, i-angle yokubuka ebanzi ne-compact form factor. Lezi zici zenza iphakethe libe i-LED ekahle ebangeni elibanzi lokufaka izicelo zokukhanyisa. I-White Mid Power LED iyatholakala ebangeni lokushisa kombala kusuka ku-2700K-650OK. Usayizi: 5.0 × 5.4 mm Amandla: 0.25W / 2.0W Izici Eziyinhloko ● I-RGB.W ingalawulwa ngokuzimela ● Umphumela okhanyayo kakhulu, Ukukhanya okuhle okuxubile okuhle, ukuqina okuphezulu ● Diffe ...
Umphumela okhanyayo ophakeme 2835 RGB Umbala owodwa wombala
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-2835 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Uhlaka oluncane lwephakethe nokuqina okukhulu kukwenza kube inketho ekahle yokukhanya kwephaneli ye-LED, ukukhanya kwebhalbhu ye-LED, ukukhanya kwesibani se-LED, ukukhanya kwangemuva nokunye. Le ngxenye inokuphrinta konyawo okuhambelana nobukhulu obufanayo be-LED emakethe namuhla Ukhiye Izici ● Itholakala ngombala opholile opholile, oMhlophe ongathathi hlangothi noMhlophe ● I-chromatici ehambisana ne-ANSI ...
Imiphumela ekhanyayo ephezulu kathathu ku-5054 RGB Series
Incazelo Yomkhiqizo Iphakethe le-RGB 5054 linokukhipha okuphezulu kokuqina, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, i-angle yokubuka ebanzi ne-compact form factor. Lezi zici zenza le phakheji i-LED ekahle ebangeni elibanzi lokufaka izicelo zokukhanyisa. Usayizi: 2.8 × 3.5mm / 5.0 × 5.0 mm Amandla: 0.2W / 0.5W Izici Eziyinhloko ● Ukukhanya okukhanyayo okuphezulu nokusebenza kahle okuphezulu ● Iyahambisana nenqubo yokufaka kabusha i-soldering ● Ukumelana nokushisa okuphansi ● Impilo yokusebenza ende ● I-angle yokubuka ebanzi ngo-120 ° ● Abicah i-encapsul ...